Moments Neshamwari 24
Izvo hazviratidzika kuti zvinonzwisisika kuti mibvunzo miviri kana kupfuura inopesana inogona kuva yakarurama pamusoro pezvokwadi. Sei kune mafungiro akawanda pamusoro pezvimwe zvinetso kana zvinhu? Ko isu tichazokwanisa sei kutaura kuti ndedzipi pfungwa yakarurama uye kuti chokwadi ndechipi?
Ichokwadi chakareruka Chokwadi haigone kutsveneswa kana kuratidzwa kune pfungwa dzemunhu, kana kuti pfungwa dzemunhu dzaisakwanisa kunzwisisa humbowo kana kuratidzira kwaive kuri kugona kuzvipawo, chero kunze kwemitemo, sangano, uye basa rechadenga rinogona kuverengerwa kubhomba. nyuchi, kana kupfuura tadpole inogona kunzwisisa kuvaka uye kushanda kwerudzi rwomoto. Asi kunyangwe hazvo pfungwa dzemunhu dzisingakwanise kunzwisisa Chokwadi chimwe muzvinhu zvacho, zvinokwanisika kunzwisisa chimwe chinhu chechokwadi pamusoro pechinhu chero chipi zvacho kana dambudziko mudenga rakaratidzwa. Chokwadi chiri chinhu sezvazviri. Izvo zvinokwanisika kuti pfungwa dzemunhu dzive dzakadzidziswa uye nekugadziridzwa zvekuti inogona kuziva chero chinhu sezvazviri. Kune matatu matanho kana madhigiri ayo iyo pfungwa yemunhu inofanira kupfuura kuburikidza, isati yagona kuziva chero chinhu sezvazviri. Nyika yekutanga kusaziva, kana rima; yechipiri mafungiro, kana kutenda; chechitatu ruzivo, kana chokwadi sezvazviri.
Kusaziva ndiyo mamiriro erima repfungwa umo pfungwa dzingadzikira kuona chinhu, asi kutadza kuzvinzwisisa. Kana mukusaziva pfungwa dzinofamba mukati uye dzinodzorwa nemanzwiro. Pfungwa dzakapusa gore, dzeruvara uye dzinovhiringidza pfungwa kuti pfungwa dzinotadza kusiyanisa pakati pegore rekusaziva nechinhu sezvazviri. Pfungwa dzinoramba dzisingazivi apo ichidzorwa, kutungamirirwa uye kutungamirwa nemanzwiro. Kuti ubude kunze kwerima rekusaziva, pfungwa dzinofanira kuzvibata nekunzwisisa zvinhu sekusiyaniswa nekunzwa kwezvinhu. Kana pfungwa dzichiedza kunzwisisa chinhu, sekusiyaniswa nekunzwa chinhu, chinofanira kufunga. Kufunga kunoita kuti pfungwa ipfuure kunze kwenyika yekusaziva kusviba kupinda muchimiro chekufunga. Mamiriro ezvinhu ekufunga ndeekuti mune iyo pfungwa inonzwa chinhu uye inoedza kutsvaga kuti chii. Kana iyo pfungwa ichizvibatika nechinhu chero chipi zvacho kana dambudziko parinotanga kuzvipatsanura serinofunga kubva kuchinhu icho chazvinetsa pacharo. Ipapo inotanga kuva nemafungiro nezvezvinhu. Idzi pfungwa hadzina kunetseka nazvo kunyange zvikagutsikana neyakajeka yekusaziva, chero munhu ane usimbe kana akasvinura pfungwa dzichazvibatikana nepfungwa nezvezvinhu zvisingashande kunzwi. Asi ivo vanozova nemafungiro pamusoro pezvinhu zvehunhu hunonakidza. Pfungwa ndiyo mamiriro umo pfungwa ingasanyatsoona chokwadi, kana chinhu sezvazviri, chakasiyana nemanzwi, kana zvinhu sezvazvinoita. Mafungiro emunhu anoumba zvaanotenda. Zvaanotenda ndizvo mhedzisiro yemafungiro ake. Pfungwa ndiyo yepakati nyika pakati perima nechiedza. Iyo ndiyo nyika umo zvinonzwika uye zvinoshandurwa zvinhu zvinosangana nechiedza nemimvuri uye kuratidzwa kwezvinhu kunoonekwa. Mune mamiriro ezvinhu aya epfungwa pfungwa hadzigone kana kusiyanisa mumvuri kubva kuchinhu chinoritora, uye kutadza kuwona mwenje sewakasiyana kubva mumumvuri kana chinhu. Kuti ubude mumamiriro ezvinhu, pfungwa dzinofanira kuedza kunzwisisa mutsauko uripo pakati pechiedza, chinhu, uye kuratidzwa kwawo kana mumvuri. Kana pfungwa dzichiedza kudaro inotanga kusiyanisa pakati peemaonero akanaka nemaonero asiri iwo. Maonero chaiwo iko kugona kwepfungwa kusarudza sekusiyanisa pakati pechinhu nekuratidzira kwayo nemumvuri, kana kuona chinhu sezvazviri. Kufunga kwakashata iko kukanganisa kwekuratidzira kana mumvuri wechinhu chechinhu icho pachako. Ndichiri mumamiriro ezvinhu epfungwa pfungwa hadzione iwo mwenje wakasiyana kubva pane zvakanaka uye zvisiri izvo maonero, kana izvo zvinhu zvakasiyana nemaitiro avo nemimvuri. Kuti tikwanise kuve nemafungiro akanaka, munhu anofanira kusunungura pfungwa kubva pakusarura uye pesvedzero yemanzwiro. Pfungwa dzinodaro dzichivara kana kupesvedzera pfungwa kuti dzigoburitsa rusaruro, uye uko rusaruro rwusina pfungwa chaiyo. Inofungidzirwa uye kudzidziswa kwepfungwa kufunga kwakakosha kuti vaumbe mafungiro akanaka. Kana pfungwa dzagadzira mafungiro akanaka ndokuramba kubvumira pfungwa kuti dzishamise kana kushatisa pfungwa dzakapesana nemaonero akanaka, uye inobata pfungwa dzakadaro, zvisinei kana zvingave zvinopesana nechinzvimbo kana kufarira kwevamwe kana shamwari, uye inonamatira kune chaiyo yekufunga pamberi uye mukufarira kune zvimwe zvese, ipapo iyo pfungwa ichave panguva inenge ichipinda mumamiriro ekuziva. Pfungwa haizovi nemafungiro pamusoro pechinhu kana kuvhiringidzwa nekupokana nemamwe maonero, asi ichaziva kuti chinhu ichi sezvairi. Mumwe anopfuura kunze kwemamiriro ezvinhu kana ezvitendero, uye achipinda mudunhu rekuziva kana kujekesa, nokubatirira kune icho chaanoziva kuve ichokwadi mukusarudza kune zvimwe zvese.
Pfungwa inodzidza kuziva chokwadi chechinhu chero chipi zvacho nechokureva nezvacho nechinhu icho. Mune mamiriro eruzivo, mushure mekunge adzidza kufunga uye ave kugona kusvika pamazano chaiwo nerusununguko kubva pakusarura uye nekuenderera mberi nekufunga, pfungwa dzinoona chero chinhu sezvazviri uye dzinoziva kuti zvakaita sezvakaita nechiedza. rinovhenekera ruzivo. Ndichiri munharaunda yekusaziva zvaisakwanisa kuona, uye panguva yemafungiro yakanga isingaone iwo mwenje, asi ikozvino mudunhu rekuziva pfungwa dzinoona mwenje, sekusiyaniswa kwechinhu uye kuratidzwa kwaro nemumvuri. . Ichi chiyedza cheruzivo chinoreva kuti chokwadi chechinhu chinozivikanwa, kuti chero chinhu chinozivikanwa kuva sezvachiri chaizvo uye kwete sezvazvinoratidzika kunge chakafukidzwa nekusaziva kana kuvhiringidzwa nemifungo. Ichi Chiedza cheruzivo rwechokwadi chisingazokanganisike kune chero mamwe mwenje kana mwenje unozivikanwa mundangariro mukusaziva kana maonero. Chiedza cheruzivo pachako chiri chiratidzo kupfuura mubvunzo. Kana izvi zvikaonekwa, imhaka yekuti kufunga kunopedzwa neruzivo, sekunge munhu achiziva chinhu haachaenda nenzira yakaoma yekufunga nezve izvo zvaakatofunga nezvazvo uye zvaanoziva iye zvino.
Kana munhu achipinda mukamuri rerima, anonzwa nzira yake pamusoro pekamuri uye anogona kugumburwa nezvinhu zviri mariri, uye achizvipwanya nepamenenji nemadziro, kana kudonha nevamwe vari kufamba zvisina chinangwa saiye amene mukati mekamuri. Iyi ndiyo mamiriro ekusaziva anogara mairi vasingazivi. Mushure mekunge afamba nezve mukamuri meso ake akajaira rima, uye nekuyedza anokwanisa kusiyanisa mutsara wechinhu uye nhamba dzinofamba mumba. Izvi zvakafanana nekufamba uchibva mudunhu rekusaziva uchienda mune mamiriro ekufunga uko munhu achigona kusiyanisa chinhu chimwe chakafarikana kubva kuchimwe chinhu uye kunzwisisa kuti sei asingawirirane nezvimwe zvinofamba. Ngatifungei kuti iye ari mune ino mamiriro iye zvino anozvinyima iye pakare pakareba rwechiitiko chakatakurwa uye chakavanzika pamusoro peye munhu, uye ngatifungei kuti ikozvino anotora mwenje obatidza murahwo mukamuri. Nekuchibatidza ikatenderedza mukamuri iye anovhiringidza kwete iye chete asiwo anovhiringidza uye anotsamwisa vamwe vanofambisa mukamuri. Uyu akafanana nemurume ari kuedza kuona zvinhu sezvazvisiyana kubva pane izvo zvavakaonekwa kwaari kuti ndizvo. Sezvaanovhenekera mwenje wake zvinhu zvinoratidzika kunge zvakasiyana nekure uye mwenje unopenya kana kuvhiringidza chiono chake, semaonero emunhu anovhiringidzwa nemafungiro anopesana iye nevamwe. Asi paanenge achiongorora nokungwarira chinhu chine chigadziko chake, uye chisingazungunurwe kana nemwenje yemamwe mifananidzo angangopenya, anodzidza kuona chero chinhu sezvazviri, uye anodzidza nekuenderera mberi nekuongorora zvinhu, maitiro ekuona chero chinhu chiri mukamuri. Ngatitii ikozvino ngatiti iye anokwanisa nekuongorora zvinhu uye hurongwa hwekamuri kuwana kuvhurika kwemukamuri hwakavharwa. Nekuenderera mberi kuedza anokwanisa kubvisa icho chinokanganisa kuvhurika uye kana iye akaita mwenje unofashamira mukamuri uye unoita kuti uone zvinhu zvese. Kana asina kupofumadzwa nemafashama echiedza chakajeka uye akasazovhara zvakare kuvhurika nekuda kwechiedza chinopinda uye chinopenya maziso ake, asina kujaira mwenje, zvishoma nezvishoma anoona zvinhu zvese zviri mumba musina kunonoka kuenda. pamusoro peumwe neumwe zvakasiyana nemwenje wake wekutsvaga. Mwenje unofashidza mukamuri wakaita sechiedza cheruzivo. Chiedza cheruzivo chinozivisa zvinhu zvese sezvairi uye zviri muchiedza icho icho chinhu chimwe nechimwe chinozivikanwa kuva sezvairi.